အဓိကအခွံထုတ်လုပ်သူများ တရုတ် Key shell ကိုစက်ရုံ & ပေးသွင်း
VW VOLKSWAGEN CC Passat Magotan3Buttons အတွက်အစားထိုး Shell Smart Remote ကားသော့ခတ်အဖုံးစတိုင်။
VW VOLKSWAGEN CC Passat Magotan3Buttons အတွက်အစားထိုး Shell Smart Remote ကားသော့ခတ်အဖုံးစတိုင်ပုံစံ။ ကားသော့ခွံအမျိုးမျိုးတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့သည်။ BMW / FOR Acura / FOR Alfa / for Audi / FOR Benz / FOR BMW / FOR Buick / FOR Cadillac / Chevrolet FOR / FOR Holden၊ Chrysler / FOR Citroen FOR / Ford Fiat၊ GM FOR FOR Honda / Hyundai FOR Kia / FOR Landrover / FOR Lexus / FOR Mazda FOR Maserati FOR Mitsubishi FOR FOR Nissan FOR FOR opel / Peugeot FOR / Porsche FOR / Renault FOR / SAAB အတွက် / Subaru / Suzuki FOR / Volvo / Toyota / F အတွက် ... FOR ...
New VW3ခလုတ်ကိုဝေးလံခေါင်ဖျားသောအခွံ (ရွေးရန်အတွက်အရောင် ၅ ခု) အတွက်
VW Skoda ထိုင်ခုံအတွက်ရောင်စုံကားသော့ခွံအဖုံး Octavia3ခလုတ်များခေါက်ရွှေ့နိုင်သောအဝေးထိန်းခလုတ်ခုံ ၄ ခုနှင့်ခုတ်ဖြတ်ထားသောဘလိတ်ဖြင့်ကားသော့အမျိုးမျိုးတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ - BMW / FOR Acura / FOR Alfa / for Audi / FOR Benz / FOR BMW / FOR Buick / Cadillac FOR / Chevrolet FOR / FOR Holden / Chrysler / FOR Citroen / Ford / Fiat / GM / FOR Hyundai FOR Kia / FOR Landrover FOR FOR Lexus FOR Mazda / Maserati FOR FOR Mitsubishi FOR FOR Nissan / FOR opel / Peugeot FOR / Porsche FOR / Renault FOR / SAAB / Subaru / FOR Suzuki / FOR Volvo အတွက် ...
VOLKSWAGEN B5 Passat Ibiza Tiguan Passat ဂေါက်သီးအစားထိုး HU66 Uncut Blade 1 Button Blank Key နှင့်အတူဂေါက်သီးအစားထိုးကားဂေါက်သီးအစားထိုးသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: အမျိုးအစား: VW အတွက်အဝေးထိန်းကားသော့အိတ်အလေးချိန်အလေးချိန် - ၂၀ ဂရမ် / pcs ပစ္စည်း - ABS + သတ္တုအရောင် - အမဲရောင်ခလုတ်များ - ခလုတ်များမပါ။ Transponder Chip - အီလက်ထရွန်နစ်ဘုတ်များ - ဘက်ထရီမရှိပါ - လျှောက်ထားခြင်း - VW နှင့်အခြားမော်ဒယ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှင့်အတူတူဖြစ်သည်အင်္ဂါရပ်များ - ၁၀၀% Brand New နှင့်အရည်အသွေးမြင့်! ကျိုးပဲ့သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသော့များအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး အပိုဆောင်းသော့ချက်အဘို့ကြီးသော။ သော့ခလောက်နှင့်သော့ဓါးကိုသာ။ မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် internals ။ ဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်မှဓါးသွားဖြတ်ယူပါ။ အဓိကဓါးသွားခုတ်လိုက်ရုံပါပဲ ...
Skoda အတွက် Seat Ibiza လီယိုနာဒို Toledo Altea အတွက် VW Polo ဂေါက်သီး Jetta Sharan အတွက် VW2Button Uncut Blade ဝေးလံသော Key Shell အတွက်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: အမျိုးအစား: VW အတွက်အဝေးထိန်းကားသော့အိတ်အလေးချိန်အလေးချိန် - 40 ဂရမ် / pcs ပစ္စည်း - ABS + သတ္တုအရောင် - အနက်ရောင်ခလုတ်များ - ခလုတ် ၂ ခု - Transponder Chip - အီလက်ထရွန်နစ်ဘုတ်များ - ဘက်ထရီမရှိပါ - လျှောက်ထားခြင်း - VW နှင့်အခြားမော်ဒယ်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံနှင့်အတူတူဖြစ်သည်အင်္ဂါရပ်များ - ၁၀၀% Brand New နှင့်အရည်အသွေးမြင့်! ကျိုးပဲ့သို့မဟုတ်ဟောင်းနွမ်းသော့များအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုး, ဒါမှမဟုတ်တစ် ဦး အပိုဆောင်းသော့ချက်အဘို့ကြီးသော။ သော့ခလောက်နှင့်သော့ဓါးကိုသာ။ မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် internals ။ ဒေသခံသော့ခတ် / ကုန်သည်မှဓါးသွားဖြတ်ယူပါ။ ရုံဓါးကိုဖြတ်, t ကို ...
2/3/4 ခလုတ်များ Flip Car Remote Key Shell Fob Fit Honda Acura Civic Accord အတွက် Jazz CRV HRV သော့ခလောက်အိမ်ရာအစားထိုး
အခြေအနေ: 100% Brand New Transponder Chip: လျှပ်စစ်၊ ဘက်ထရီမရှိ၊ မသင့်လျော်ပါ - Honda Civic Accord အတွက် Jazz CRV HRV ၂၀၀၈-၂၀၁၂ အတွက် Acura TL 2009-2014 အတွက် Acura TSX 2010-2013 အတွက် (၂၀၀၉-၂၀၁၄) အတွက် Honda Accord၊ Acura ZDX ၂၀၁၁-၂၀၁၃ HONDA သဘောတူညီချက် ၂၀၁၁-၂၀၁၃ HONDA Odyssey 2011-2013 HONDA CR-V 2011-2013 HONDA Civic အရေးကြီးမှတ်ချက် - ၁။ ဤပစ္စည်းသည်ဝေးလံသောဒေသတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်ဝေးလံသောသော့ခွံအခွံအစားထိုးခြင်းသာဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းတွင်အတွင်းပိုင်း (အဝေးမှ / အီလက်ထရောနစ် / transponder ချစ်ပ်) ယူနစ်မရှိပါ။ ၃ ။
၂/၃/၄ ခလုတ်များဟွန်ဒါ CR-V Civic Insight Ridgeline 2003 ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ အတွက်ကားသော့အခွံ Shell Remote Fob Cover
အခြေအနေ: ၁၀၀% ကုန်ပစ္စည်းအသစ်: ဝေးလံသောကားသော့ဒီဇိုင်း: ဖက်ရှင်ကားပုံစံပစ္စည်း: abs + metal အရောင်: ပုံကိုပြသခလုတ် - ၂/၃/4 ခလုတ်ခုံများ၊ ဘက်ထရီမရှိပါ။ အီလက်ထရွန်နစ်မရှိ၊ အလေးချိန် - ၁၅ ဂဂတပ်ဆင်မှု - အတွက်ဟွန်ဒါ ၂၀၀၃ ၂၀၀၈ ၂၀၀၉ Accord Cr-V Civic Insight Ridgeline နှင့်အောက်ဖော်ပြပါအခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့် key blank နှင့် battery держယ်များ၏တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်များ။ အင်္ဂါရပ်များ - ကျိုးသောခလုတ်များသို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသောသော့ခလောက်များဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးခြင်း။ အဓိကကိစ္စသာ။ မဟုတ်အီလက်ထရောနစ် internals ။ ဒါ ...
2/3/4 ခလုတ်များ Modified Flip Remote Car Key Shell Fob Honda Fit Civic CRV Jazz HRV Accord Pilot Replacement Key Case
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: Item Name: Remote Control ကား၏ကားသော့အိတ်အလေးချိန် - ၅၀ ဂရမ် / pcs ခလုတ်များ - ၂/၃/၄ ခလုတ်များဓါးသွား - ဖြတ်တောက်ထားသည့်ဓါးပစ္စည်း - ABS + Metal Transponder Chip - အမှတ်တံဆိပ်အမှတ်တံဆိပ် / စတစ်ကာမရှိ။ အဘယ်သူမျှမလျှောက်လွှာ - Honda Fit Civic အတွက် CRV Jazz HRV Accord Pilot သတိပေးချက် - 1. ပစ္စည်းသည် PCB ဘုတ်နှင့်အတွင်းဘက်ထရီမပါသည့်သော့ချက်ကျသည့်အရာသာဖြစ်သည်။ ၂။ ပုံအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားသောတကယ့်ဓါတ်ပုံများဖြစ်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်နှင့်တူညီမှုရှိမရှိသေချာအောင်သင်၏အဓိက shell ကိုစစ်ဆေးပါ။ ...
ဟွန်ဒါ Accord Civic CRV ဂျက်ဇ် S2000 Fit Odyssey အတွက်ခလုတ်များခလုတ်ခုံအစားထိုးအဝေးထိန်းခလုတ်ခုံး Case Shell 2/3/4 ခလုတ်များ
အခြေအနေ - ၁၀၀% အသစ်အရောင် - ပုံတွင်ပြထားသည့်အတိုင်းခလုတ် - ၃ / ၂ + ၁ ခလုတ်အရွယ်အစား - ၆ စင်တီမီတာ * ၃.၂ စင်တီမီတာ * ၁ စင်တီမီတာ (L * W * H) အလေးချိန် - ၁၁ ဂဂအင်္ဂါရပ်များ - ၁ ။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များနှင့်သော့တစ်ချောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးသို့မဟုတ် ဝတ်ဆင်သော့ချက်အမှု။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူမှဓါးသွားဖြတ်ခြင်း။ ၄။ အတွင်းရှိအီလက်ထရွန်ကို (Immobilizer / transponder ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သည်) ကိုမူလအဝေးမှယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက shell ထဲသို့ထည့်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ: Honda Accord 1997 အတွက် (၂ + ၁ ခလုတ်သာ) အတွက် ...
2/3/4 Honda Accord CR-V FIT XRV VEZEL CITY JAZZ CIVIC HRV FRV အတွက်ခလုတ်များ Remote Key Shell ခလုတ်များ Remote Key Case Fob
အခြေအနေ: ၁၀၀% Brand New အရောင်: Black Button: ၂ ခလုတ်များ Key Blank: Yes Transponder ချစ်ပ် - အီလက်ထရောနစ်၊ ဘက်ထရီမရှိ - အမှတ်တံဆိပ်မရှိပါ။ ထူးခြားချက်များ - ၁။ ကျိုးပဲ့သောခလုတ်များသို့မဟုတ်သော့ခတ်ထားသောသော့ခလောက်ဖြင့်သော့ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ၂။ Key case နှင့် uncut key blade သာဖြစ်သည်။ 3. ဓားသွားကိုဒေသခံသော့ခတ်သူ / ကုန်သည်မှဖြတ်ယူပါသို့မဟုတ်သင်၏မူလနှင့်အတူဓါးကိုလဲလှယ်ပါ။ ၄။ အတွင်းရှိအီလက်ထရွန်ကို (Immobilizer / transponder ချစ်ပ်ပါ ၀ င်သည်) ကိုမူလအဝေးမှယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အဓိက shell ထဲသို့ထည့်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ F ...
Honda Civic Accord City CR-V ဂျက်ဇ်ဂီတ XR-V Vezel HR-V FRV အတွက်မူရင်းခလုတ် ၂/၃ ခလုတ်အတွက် Remote Car Key Case Shell အတွက် Shell
Honda Civic Accord City CR-V ဂျက်ဇ်ဂီတ XR-V Vezel HR-V FRV နှင့်အောက်ဖော်ပြပါအခန်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အဓိကအလွတ်နှင့်ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသူများ၏တူညီသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်အတွက်…ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်း - အခြေအနေ: ၁၀၀% အသစ်အရောင် - Black Button:2/3ခလုတ်များကွက်လပ်ကြီး - ဟုတ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်ဘုတ်ပြား - ဘက်ထရီမရှိပါ - အလေးချိန် - ၂၀ ဂရမ်သတိပေးချက် - ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ဝေးလံခေါင်ဖျားသည် ၀ ယ်ယူခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကဲ့သို့သောထုတ်လွှင့်စက်နှင့်ချစ်ပ်အသုံးပြုခြင်းကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ပစ္စည်းရုပ်ပုံများအကြောင်း: ဤပုံသည်ထုတ်ကုန်သည်အမှန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ကားကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ